Xidig Man City Ee Ilkay Gundogan Oo Sharaxay Farqiga U Dhaxeeyay Klopp Iyo Pep & Midka Fiican %
Ilkay Gundogan, ciyaaryahanka hada khadka dhexe uga dheela Manchester City ayaa wuxuu aaminsan yahay in macalinkiisa Pep Guardiola, uu yahay midka dunida ugu fiican dhamaan kuwa asaagiisa ahna ka wanaagsan.
Laacibkaan oo fasal ciyaareedkan kooxda Dortmund, uga soo wareegay Sky Blues ayaa wuxuu kaloo sharaxaad dheeri ah uu ka bixiyay sababtii uu Liverpool uga door-biday ku biiritaanka Man City oo uu hada joogo.
Manchester City ayaa waxay hada tahay kooxda ugu cad-cad inay ku guuleysato horyaalka Premier League, ee wadanka Ingiriiska, waxayna ku hogaaminayaa waqti xaadirkaan 16 dhibcood oo ay ka sareeyaan Man United oo 2aad ah.
“Klopp [macalinka Liverpool] waa uu ijecel yahay inaga, laakiin aniga ayaa go’aan saday inaan ku biiro [Man City,” ayuu ku sheegay ciyaaryahankaan dalka Jarmalka udhashay, wareysi uu siiyay Tabloid-ka Bild.
Isagoo sharaxaad dheeri ah ka bixinaya sababtii uu kooxda Guardiola ku doortay ayuu ku jawaabay: “Maxaa yeelay [Pep Guardiola] wuxuu yahay mid leh falsafadda aan aniga ah, waana mid aan ka helo ciyaarahaas oo kale.
“Klopp waa sida aabahay oo kale,” ayuu Ilkay Gundogan, daboolka ka qaaday, isagoona cod dheer ku sheegay arrinkaas.
“Guardiola, wuxuu ahaa ciyaaryahan weyn, macalin fiican, waana tababaraha ugu fiican adduunka,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, ciyaaryahanka hada khadka dhexe uga dheela Manchester City, ee Ilkay Gundogan.
Ilkay GundoganKloppMan CityPep